जमेको कानेगुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस् सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुण ! – Khabaarpati
November 14, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on जमेको कानेगुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस् सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुण !
काठमाडौँ । शरीरको साथसाथै, कान सफा गर्नु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मानिसहरू प्राय जसो आफ्नो शरीर सफा गर्दछन् तर कान सफा गर्न बिर्सन्छन्। कान सफा नगर्दा, कुनै पनि व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ। कान सफा नगर्दा ठूलो रोगलाई निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईंले कान सफा गर्नुहुन्न भने, त्यसपछि आन्तरिक फोहोर जम्मा भई एक दिन कान दुख्ने समस्या आइपर्छ।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
कानको फोहोर पनि जैतुनको तेलले हटाउन सकिन्छ। यसको लागि, तपाईंले रातमा कानमा जैतून तेलको केही थोपा हाल्नुहोस्। करीव ३ देखि ४ दिन सम्म यो गर्नाले कानको कानेगुजी नरम हुनेछ र कानेगुजी सजीलै बाहिर आउँनेछ।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **